चलखेलका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक नै हुँदैनन्, ७० मध्ये ७ मात्रै सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : २०७४ पौष २९ शनिबार , २,७९० पटक हेरिएको
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयताका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अपारदर्शी हुने क्रम बढेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बसेका हरेक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमितभन्दा मन्त्रीको खल्तीबाट आउने ठाडो प्रस्तावको संख्या अत्यधिक हुने गरेको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकमा ४० वटा नियमित एजेन्डा थिए तर ३० भन्दा बढी आकस्मिक रूपमा आएका प्रस्ताव रहेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा झन्डै ७० वटा प्रस्तावमा छलफल भए पनि सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले सामान्य खालका ५-६ वटा निर्णय मात्रै सार्वजनिक गरे। आर्थिक चलखेलका नियुक्तिका निर्णय गोप्य राख्ने प्रयास गरिँदै आएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको खल्तीबाट निकालिएका नियुक्तिसम्बन्धी ठाडो प्रस्तावका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्दा विरोध हुने त्रासले गोप्य राखिएको हो। यस सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता बस्नेतसँग पटकपटक जानकारी लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
माओवादी सरकारमा आएपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक
मन्त्रिपरिषदमा थारुको प्रतिनिधित्व खोर्इ ?
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोकिने
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्दै
००७ सालदेखि अहिलेसम्मको मन्त्रिपरिषद कति सदस्यीय ? यस्तो छ इतिहास
मन्त्रिपरिषद विस्तार : देउवाका १९ सारथी, कसलाई कुन् मन्त्रालय ?
मन्त्रिपरिषदको निर्णय : प्रदेश २ को निर्वाचन असोज २ गते
मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय : निर्वाचन सर्‍यो, अब असार ९ गते
मन्त्रिपरिषदको निर्णय : थरुहट र मधेस आन्दोलनका घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति